UManolito Gafotas, umsebenzi wokubhala wabantwana ka-Elvira Lindo | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Ababhali, iintlobo, Iincwadi, Inoveli
UManolito Gafotas Yayiyincwadi yokuqala yabantwana ngumbhali weCadiz kunye nentatheli uElvira Lindo. I-protagonists yayo yavela njengabalinganiswa bakanomathotholo ababelizwi labo linikwa yena yedwa. Ukuza kuthi ga ngoku, la manqaku aneencwadi ezisibhozo (kunye nenye edityanisiweyo) epapashwe phakathi kuka-1994 no-2012.
Ngokuka-Sonia Sierra Infante, umlinganiswa kaManolito Gafotas "yenye yezona zinto zibalulekileyo kwinkcubeko yaseSpain kumashumi eminyaka akutshanje." Ibinzana likaSierra Infante kwingqondo yakhe yobugqirha Ngaphezulu kunye nobunzulu bomsebenzi ka-Elvira Lindo (2009), ibonisa ngokucacileyo ukubaluleka komsebenzi.
1 Malunga nombhali, uElvira Lindo
2 IGenesis kaManolito
3 UManolito Gafotas (1994)
4 Uhlwempuzekile uManolito (1995)
5 Njani molo! (amashumi alithoba anamanci asithoba anesithandathu)
6 Iingubo ezingcolileyo (1997)
7 UManolito endleleni (1997)
8 Mna kunye neMoron (1999)
9 UManolito unemfihlo (2002)
10 Eyona Manolo ilungileyo (2012)
Malunga nombhali, uElvira Lindo
U-Elvira Lindo Garrido wazalelwa eCádiz, eSpain, ngoJanuwari 23, 1962. Embindini we-70s wafuduka nosapho waya kuhlala eMadrid. Kwikomkhulu laseSpain, wagqiba isikolo esiphakamileyo kwaye waqala umsebenzi wakhe wobuntatheli kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid. Umsebenzi wakhe kwirediyo waqala esemncinci kakhulu - eneminyaka eyi-19-njengombhengezi kunye nombhali weRadio yeSizwe yaseSpain.
Ngo-1994, ukupapashwa kwe UManolito Gafotas ibonakalisa ukungena okumnandi kwinqanaba loncwadi. Akukho nto, Amadlavu amdaka kaManolito Gafotas ngo-1998 wafumana imbasa yeSizwe yaBantwana noNcwadi lwaBantu aLutsha. Ngaphandle kwe UManolito Gafotas, ULindo upapashe ishumi elinanye iincwadi zabantwana (kubandakanya uthotho UOlivia), Izihloko ezilithoba zokubaliswa kwabantu abadala, imisebenzi emine engeyonyani, imidlalo emithathu, kunye nemiboniso bhanyabhanya emininzi.
Ngamazwi ka-Elvira Lindo, umlingiswa uManolito Gafotas "wazalwa ngomnqweno wokuzonwabisa emsebenzini wam kwirediyo." Emva kwexesha, yondliwa yiminyhadala esekwe ebuntwaneni nakwezinye iinkalo zobuntu bombhali. Wongeza athi, “abalinganiswa abahlekisayo banjalo, bazalwa ngabenziyo kwaye banendawo zangaphakathi ezinesiphango. Bahlala becinga ngendawo abakuyo emhlabeni ”.
U-Lindo uvakalise udliwanondlebe olwahlukeneyo ukuba impumelelo kaManolito ibingalindelwanga. Kule meko, mhlawumbi imvelaphi kanomathotholo kaManolito yayiyeyona ibalulekileyo. Kungenxa yokuba inika iimpawu zomsebenzi welizwi elingaphakathi ngaphakathi kwendlela elula yokuqonda. Kwangelo xesha, lilizwi elinamanzi kakhulu, eliqhubekayo, eligcina konke ukutolikwa, ngongenelelo oluchanekileyo lokunika indawo kumacandelo ahlekisayo.
UManolito Gafotas (1994)
Kwincwadi yokuqala, umlinganiswa ophambili ubalisa amabali afanayo, angadibanangayo athe enzeka kwidolophu yaseCarabanchel Alto. La mabali aneendawo ezingapheliyo phakathi kwexesha labo lokuqala esikolweni kunye no-Apreli 14, usuku lokuzalwa kayisemkhulu. Umhla awukho ngengozi (umhla wokubhengezwa kweRiphabhlikhi yesiBini) njengoko ngobuqili ubonakalisa ukhetho lwezopolitiko losapho lakwaManolito.
Inkalo ebalulekileyo kulwakhiwo lwebali yimbonakalo enkulu ye-protagonist, ehanjiswa ngokwendalo kwengqondo yomntwana. Nangona kunjalo, phantsi kwembonakalo yobudenge, iimpawu zokuqonda, ububele kunye nokuzinikela kubantu abajikelezileyo ziyatyhilwa. Yonke ibalisiwe kwi "encyclopedia enkulu" ngobomi bukaManolito.
Uhlwempuzekile uManolito (1995)
Kwincwadi yesibini ye "encyclopedia enkulu" yobomi bakhe, uManolito uyakuqonda ukubalasela kwakhe njengomntu kawonke-wonke. Intshayelelo ichaza ubudlelwane phakathi kwabalinganiswa kwincwadi edlulileyo kunye nabo bavele kule fomment. Ewe umhlobo wakhe omkhulu uPaquito Medina ubaluleke kakhulu (kwaye uyambulela) ngokulungisa iimpazamo ezingama-325 awayezenzile.
En Uhlwempuzekile uManolito, kukho ukuqhubeka okuthe ngqo phakathi kwezahluko "Makazi kaMelitona" kunye "no-Anti Melitona: ukubuya", kulayishwe uburharha obuninzi. Isahluko sokugqibela sale ncwadi "Ubuxoki obumhlophe." Apho, uloyiko lwe-protagonist lumbambisa kulandelelwano oluhlekisayo xa ezama ukufihla into engenakuphepheka: akaphumelelanga kwimathematics.
Njani molo! (1996)
Esi sitolimende siqala ngentshayelelo ende. Kuyo, uManolito uchaza inkwenkwe efunde umqulu wesibini we-encyclopedia yakhe yaza yafika eCarabanchel Alto. Umntu omtsha ekuthethwa ngaye uphakamisa amathandabuzo amaninzi malunga nomntu ophambili. Eyona nto ikhuthaza uManolito ukuba agqibe-ngoncedo lomhlobo wakhe othembekileyo uPaquito Medina- umthi wakhe womnombo wokuzalwa uzele ziinkcazo ezintle.
Ngokufanayo, kwi Njani molo! "al Mustaza" kwaziswa, umntu ofunda naye eManolito ngaphandle kokubaluleka kwiincwadi zangaphambili. Umgca webali uqhubeka neziganeko ze Uhlwempuzekile uManolito (ingxaki yakhe kwimathematics) kwaye yenziwe ngokulandelelana ngexesha lehlobo.
Ukuhlamba iimpahla ezimdaka (1997)
Ukubaluleka kukaManolito njengomntu woluntu kumkhokelela ekubeni abonakalise ukulahleka kwemfihlo kwisandulela ukuya kumthamo wakhe wesine. Olu hlobo lodumo lwasekhaya luqala ukuchaphazela izihlobo zakhe (ngakumbi umama wakhe xa esiya emarikeni). Ngesi sizathu, umlinganiswa ophambili uhlangabezana neziqendu zentloni ezisetyenziselwa ukudibanisa ubunyani kunye neentsomi ngokubonakala kombhali ngokwakhe.
U-Lindo uziveza njengomfazi obawayo nothatha ithuba lokuvelela kukaManolito ukuze azuze "kwi-realiti-chous" yakhe. Eyona nto imbi yimali ebekelwe bucala usapho lukaManolito: zero. Umxholo ngokubanzi Ukuhlamba iimpahla ezimdaka ijolise kwisimo sengqondo esizinikeleyo - ngamazwi ka-Elvira Lindo - kwabancinci, umona nomona.
Manolito endleleni (1997)
Le ncwadi yahlulahlulwe kwezinye kuthotho ngenxa yokubaliswa kwayo ngokulandelelana kwendlela eyenziwe nguManolito. Manolito endleleni Inamalungu amathathu. Iqala ngo "Adiós Carabanchel (Alto)"; Esi sahluko sixelela indlela uManolo (utata wakhe) athatha ngayo isigqibo sokuthatha abantwana bakhe bayokuthomalalisa ihlobo likaCatalina (umama wakhe).
Kuyabonakala ukuba, umama ohlwempuzekileyo akakwazanga ukunyamezela elinye ixesha leholide elitshixelwe ebumelwaneni enyamezele izinto ezihlekisayo kunye nokulwa kwabantwana bakhe. Ngapha koko, "kwiveki yaseJapan" uManolito kunye ne-Imbécil (umntakwabo omncinci) benza ububi obuninzi ngaphakathi kwivenkile enkulu. Isahluko sokugqibela esithi, "El zorro de la Malvarrosa" ivala le ncwadi ngobuchule ngemidlalo emininzi kunye nepala kunxweme lwaseValencian.
Mna kunye nejerk (1999)
Zisuka nje, ubungqina buka-Elvira Lindo ngesihloko sakhe injongo yakhe yokuqhubeka nokuphonononga imiba enxulumene "nokuchaneka kwezopolitiko". Ngaphandle kwembeko kufuneka ibe "ndim ne-esile." Kodwa eli binzana libuyiselwe ngabom ngenjongo yokubonisa ubutshaba kummeli ophambili kumntakwabo omncinci. Incwadi yahlulwe yangamacandelo amathathu: "Abazukulwana bakho abakulibali", "Abantwana ababini abalahliweyo" kunye "Newaka elinye nobusuku obunye".
Amagama ala malungu abonisa ngokuchanekileyo iimvakalelo zikaManolito kunye ne-Imbécil. Nangona imeko-yokusebenza kwe-Prostate katatomkhulu-awuthothisi umnqweno wokwenza ububi babantwana. Ngokuchasene noko, abantwana baye bangcungcuthekisi abantu abadala ababangqongileyo, babangele iimeko ezihlekisayo.
UManolito unemfihlo (2002)
Kukuhanjiswa okubukhali kuyo yonke i-saga. Izahluko zayo zithetha ngotyelelo lukaSodolophu waseMadrid kwisikolo saseCarabanchel Alto. Umnyhadala ubhenca ngokucacileyo ukugxekwa kuka-Elvira Lindo ngolu hlobo lomsebenzi. Okongeza uxinzelelo olungafunekiyo kwiintsana ngenxa yabantu abadala. Ngapha koko, uxinzelelo lwengqondo oluhlupheke ebantwaneni lunokuhlelwa njengokuxhatshazwa.
Ngokufanayo, umbhali ukrwelela uhanahaniso lwezopolitiko. Abo basebenzisa olu hlobo lwenkomfa ukuguqula abantu nokuxhasa izicwangciso ezinokuxoxwa. Le ncwadi iyaqhubeka kwi "The Flying Chinese", ibali elipapashwe nguLindo kwi Ilizwe leveki. Uchaza ukwamkelwa kosana olutsha kusapho ngokwembono kaMoron (ombona njengeTshayina eneempawu zenja).
Ibinzana ngu-Elvira Lindo.
Eyona Manolo intle (2012)
Sekudlule iminyaka elishumi. Umona obangelwe yimonon ngoku yinto eyadlulayo kuba "uChirly" umhlisile umntakwabo omncinci njengoyena mntu owonakele kusapho. Ukukhula kukaManolo kuthetha ukuqonda okungcono (kunye nokuzincama) kwemisebenzi kayise uManolo yokuxhasa ikhaya lakhe. Kwangokunjalo, uManolito akasamjongi umama wakhe uCatalina njengesohlwayo sobubi; unombulelo ngakumbi kubazali bakhe.
Abanye abalinganiswa abaphambili kolu ngcelele abaswelekanga kule ncwadi: uyisemkhulu, ogcina ubudlelwane obubaluleke kakhulu kuye. "I-orejones", i-Jihad, okanye uphawu oluchukumisayo lwe-protagonist okanye amacandelo alayishwe uburharha bokwenyani akasileli ekuqeshweni. Eyona Manolo intle Imele ukubamba umlingiswa othandwa kakhulu ngabantwana kunye nabantu abadala abavela kulo lonke elaseSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » UManolito Gafotas
Zakudala kunye nezinye iincwadi malunga nobhubhane
Sihlalutya ngokufutshane umsebenzi "Romancero gitano" ngu-FG Lorca